SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Toba) Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hiri Motu Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Maltese Mam Mambwe-Lungu Maya Mazatec (Huautla) Mixe (North Central) Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Vietnamese Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Chinangwa choupenyu chii?
Nei vanhu vachitambura uye vachifa?
Mwari anondida here?
Wakambozvibvunza mibvunzo yakaita seiyi here? Kana wakadaro, hausi wega. Vanhu vakawanda pasi rose vari kunyatsotsvaka mhinduro dzemibvunzo inokosha muupenyu. Unogona kudziwana here?
Vakawanda vangati, “Dzinowanika!” Sei vachidaro? Nokuti vakawana mhinduro dzinogutsa dzemibvunzo yavo kubva muBhaibheri. Ungada kuziva zvinodzidziswa neBhaibheri here? Kana uchida, unogona kubatsirwa nepurogiramu yekudzidza Bhaibheri usingabhadhari inoitiswa neZvapupu zvaJehovha. *
Panyaya yekudzidza Bhaibheri vamwe vanoti: “Handina nguva yacho.” “Rakaoma kunzwisisa.” “Ndinotya kuzokunyeperai.” Asi vamwe havadaro. Vanobvuma kudzidza zviri muBhaibheri. Ona zvakataurwa nevamwe vacho:
“Ndakapinda chechi yeRoma nedzimwe dzakabuda muRoma, uyewo yechiSikh neyechiBuddha, ndikazodzidza zvechitendero kuyunivhesiti. Asi mibvunzo yangu yakawanda pamusoro paMwari haina kupindurwa. Ndakazoshanyirwa nemumwe weZvapupu zvaJehovha. Ndakafarira kuti mhinduro dzacho dzaibva muBhaibheri, saka ndakabvuma kudzidza Bhaibheri naye.”—Gill, England.
“Ndaiva nemibvunzo yakawanda asi mufundisi wekuchechi kwedu haana kuipindura zvinondigutsa. Asi mumwe weZvapupu zvaJehovha akandipindura achishandisa Bhaibheri chete. Paakandibvunza kuti ndaida kudzidza zvakawanda here, ndakabva ndangobvuma ndichifara.”—Koffi, Benin.
“Ndaida kuziva zvinoitika kana munhu afa. Ndaitenda kuti vakafa vanogona kukuvadza vapenyu, asi ndaidawo kuziva kuti Bhaibheri rinotii. Saka ndakatanga kudzidza Bhaibheri neshamwari yangu yaiva Chapupu.”—José, Brazil.
“Ndaiedza kuverenga Bhaibheri asi ndaisarinzwisisa. Zvapupu zvaJehovha zvakazouya zvikanyatsonditsanangurira uprofita hweBhaibheri hwakati kuti. Izvi zvakaita kuti ndide kudzidza zvimwe.”—Dennize, Mexico.
“Ndaisava nechokwadi kuti Mwari anondida here. Saka ndakanyengetera kuna Mwari anotaurwa muBhaibheri. Mangwana acho, Zvapupu zvakauya kumba kwangu, uye ndakabvuma kudzidza Bhaibheri navo.”—Anju, Nepal.
Zvakataurwa nevanhu ava zvinotiyeuchidza mashoko aJesu ekuti: “Vanofara vaya vanoziva zvinodiwa zvavo zvomudzimu.” (Mateu 5:3) Vanhu vakasikwa vaine chido chekuziva nezvaMwari. Mwari chete ndiye anogona kuita kuti timuzive uye anozviita achishandisa Shoko rake Bhaibheri.
Saka chidzidzo cheBhaibheri chinoitwa sei? Chingakubatsira sei? Mibvunzo iyi ichapindurwa munyaya inotevera
ZITA: Rakabva mushoko rechiGiriki rekuti bi·bli′a, rinoreva kuti “mabhuku madiki”
MABHUKU ARIMO: Mabhuku 39 echiHebheru (nedzimwe ndima dzechiAramaiki) uyewo mabhuku 27 echiGiriki
RAKANYORWA: Nevanyori vanenge 40 mumakore anenge 1 600, kubva muna 1513 B.C.E. kusvika munenge mugore ra98 C.E. *
MITAURO: Rakashandurwa rose kana kuti mamwe mabhuku aro mumitauro inopfuura 2 500
KUPARADZIRWA KWARO: Zvinofungidzirwa kuti pane maBhaibheri anenge mabhiriyoni mashanu ane vanhu, saka hapana rimwe bhuku rinoripfuura
^ ndima 23 B.C.E. anomiririra mashoko eChirungu okuti “Before the Common Era,” uye C.E. anomiririra “Common Era.”
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI April 2015 | Ungada Here Kudzidza Bhaibheri?